Cadde Muusoow, Ha Gelin Meherad Kaa Dheer (Magta iyo Axkaamta)
Ma ogtahay askari jaahilaan amar ka qaataaye. Waxay ka mid ahayd murti ay is-dhaafdhaafsanayeen hal-abuurro Soomaaliyeed. Askari horaa diiday Axkaamta Islaamka sida dhaxalka ragga iyo dumarka waana la ogaa wixii ka raacay. Hadda ayaa waxaa soo baxay Janan Cadde Muuse oo raba inuu maro waddadii janankii ka horreeyey, Maxamed Siyaad.
Gabyaa Khaliif Sheekh Maxamuud ayaa dhowr meeris ku yiri:
Ma marsane Qur’aankeenu waa lagama maarmaane
Waxaa lagu manaafacaadsadaa labada meeloode
Mugdi baa Ibliis kaaga rogey diinta moolka ahe
Mursaliintu waxay sheegayeen malaha leexleexe
Muslimiinta waxaa loogu diray xaqa ha muujeene
Nin malaasan baan garan wixii Eebbe maanacaye
Ummadiba markaas kii jiray muunad ku lahayde
Rasuulkeenii waa Malag-Jibriil macallinkiise
Xaddiis Muxamed laga soo warshaan kuu madqaxayaaye.
Gabyaagaasi wuxuu caddeeyey faa’iidada iyo wanaaga ku jira raacidda diinta Islaamka. Wuxuu xusay in qof eber ah oo keliya is hortaagikaro diinta Islaamka; isagoo sheegay in qofkaasi yahay nin Ibleys raacay.
Abwaan kale oo Soomaaliyeed baa hees ku cabbiray:
Dabinkaan dhigaayaan la haleelay dhaadkee.
Qofkii xaqa diida waxaa ku dhaca wax uusan ku xisaabtamin. Maaddaama shilalka Gaalkacyo ka dhacay nagu cusbeyn; ayaa labadii qolo oo dhibtu kala gaartay ku heshiiyeen arrin diinta Islaamku qabto. Muxuu Cadde Muuse xukunka Ilaahay racfaanka uga qaatay oo uu u diiday? Wuxuu diiday mag in lakala qaato! Odaygii dhalay ninkii booliiska ahaa ee Gaalkacyo lagu dilay ayaa muujiyey dadaal dheeraad ah isagoo leh: anaa iska leh qisaasta wiilkeyga, mana rabo inaan cid u dilo. Wuxuu yiri: waan u dhaafay qisaasta qolada kale ee walaalahay ah. Waxaa intaas dheer, odaygii wiilka dhalay wuxuu har iyo habeynba taagnaa maamulka Puntland iyo maxkamadda horteeda isagoo leh: dilka wiilkeygii yaan la siyaasadeyn. Odeygaas caaqilkaa oo da’ weyn jooga ayaa xitaa raadiyayaasha Gaalkacyo ka hadley isagoo u sheegaya maamulka iney ka baxaan arrin aysan shuqul ku lahayn.
Qoladii wax dishay waxay u mahadceliyeen odaygaas caaqilkaa ee ka cafiyey qisaasta. Qabiilkii wax dilay waxay soo qabteen labadii kuray oo loo heystay dilkaas. Waxay odaygaas wiilka laga dilay u sheegeen inay diyaar u yihiin wax kasta oo odaygu rabo oo Islaamku qabo. Odaygiina wuxuu kula heshiiyey inuu baajiyo dilka wiilashaas.
Bal khaladaadkii askari Cadde sameeyey aan milicsanno:
Wuxuu soo faarfaaray oo faraha la galay arrin labo qolo oo ehel ah ka heshiiyeen.
Wuxuu xabsiga kala baxay wiilashii oo uu geystay hoteel uu degenyahay. Goormaa hoteelladu xabsiyo noqdeen?
Wiilal kurayo ah buu saaray maxkamad ciidan!
Isagoo soo beylihiyey howshii loo igmaday ee ahayd hogaaminta Puntland; wax badana ku lumiyey arrin aan keligiis u oolin oo laga heshiiyey.
Ballan-ka-bax. Mar uu odayaasha qolada wax dishay uu ku yiri waxaad qaadan kartaan racfaan iyagoo warqad ka saxiixday isaga laakiin howshaas oo lagu jiro ayuu inta wiilashii la baxay saaray maxkamad kale oo ciidan oo uu midkood dil ku xukumay.
Isagoon cabbirikarin cawaaqib xumada ay keenikarto wuxuu maleegayo. Maxaa yeelay adigoo hal nin dilkiis ka hadlaya haddaad dhimasho badan keento waa arrin laga fiicanyahay.
Isagoon xitaa aqoon dhaqanka iyo taariikhda dadkuu xukumo; xitaa ma fahmikaro in ka marsankaro qoladaas wuxuu rabo iyo in kale.
Waxaa jira dad, dad laga laayey oo Cadde ka sugaya inuu usoo qabto kuwii wax dilay halka uu waqti ku lumiyey arrin la dhammeeyey.
Isaga iyo wasiirradiisa oo si toos ah u diiday xukun Ilaahay jideeyey.
Markay arrintu halkaas marayso ayaa qoladii la xaaleysay Cadde Muuse waxay ku dhaheen: annaga Ilaah baa na abuurtay, waxaanna ogolnahay wuxuu jideeyey. Taasna waxaa noo yeelay oo ku mahadsan aabbihii dhalay ninkaas booliiska ah ee la dilay. Marka Caddoow, annagu Ilaah baan raacaynaaye ee adigu ciddaad abuurtay ku fuli xukunkaad la timid. Fiicnaanlahaydaa hadduu fahmi lahaa iney arrintaas ka dhabtahay laakiin ciyaar ciyaar buu u qaatay. Qoladaas waxay is xasuusiyeen meerisyo ku xigay meerisyadaas kore oo ahaa:
Mulkigiyo naftaadaba hadduu rag u muraadyeesho
Anaa kaa mud roon iyo haddii muruq lagu sheegto
Maxastaada inaad daafacdaa ma ahan xaaraane
Marka hore ha moogaan abhigu waa mid waajibahe
Marse haddii murwada aad qabtiyo micistu yuunaasto
Haddii aadan mintidin jahannamaa lagugu muufeyne
Qoladaasi waxay isku dhaarsadeen in aan xukun baadil ah looga harin wiilashooda xitaa haddii uusan midna ka soo harin. Waxaa intaas dheer, shacabka Gaalkacyood iyo xitaa qaar ka mid ilaalada Cadde Muuse oo garowsaday khaladka jananka. Magaaladii waxay qoladaas u sheegeen inay ku garabtaagan yihiin ka dhiidhiyidda dulmigaas. Ilaalada Cadde qaarkood ayaan dagaalamin, gartayna iney yareeyaan khasaaraha dagaalka.
Shareeco-diidku, aakhiro ka hor waxay leedahay dulli iyo foolxumo. Cadde Muuse wuxuu islahaa wiil kurey ah xaq-darro ku dil laakiin wuxuu lumiyey askari kale oo isaga waardiye u ahaa. Qof kasta wuxuu garankaraa qofkii diida xukun Ilaahay. Qofku iska daa inuu diidee xitaa hadduu naftiisa ka dareemo ineysan ku qanacsaneyn xukun Ilaahay waxay wax u dhimeysaa iimaanka qofka.
Sharci-diidku kuma eka Cadde Muuse ee waxaa la wadaagey wasiirro kale sida Xaabsade oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland iyo Gaagaab oonan garaneyn waxa soo gashay. Labadaas wasiir waxay aflagaadeeyeen qolodaas Cadde la xaaleysay iyagoo sheegay ineysan geyigaas u dhalan, Xamarna laga soo abuubuley. Markii Gaagaab uu Yurub ku raaxeysanayey, qolyahaasi waxay qeyb-libaax ka qaadanayeen difaaca geyigaas.
Weligay ma arag qof meeshii laga soo doortay (constituency) iyo dadkii soo doortay caayaya. Ileyn Soomaaliya iyo Puntland waxaa wax lagu qeybsaday qabiil. Gaagaab wuxuu caayey dadkiisii uu mataley ee uu wasiirnimada ku qaatay.
Tayo-xumada maamulka Puntland waxaa ku tusinaya, seddexdaas nin oon magacoownay waxay ka dhammaan la’yihiin arrintaas laga heshiiyey ee odaygii caaqilka ahaa ee qisaasta lahaa dhammeeyey iyadoo waafaqsan diinta Islaamka. Sida xaqiiqda ah waxaa maamulka u yaal dad laka diley oo dadkii weliga u ahaa dadkii la dilay ay maamulka ka dalbayaan in wixii wax ka dilay loo soo gacangasho halka ay ku mushquulsanyihiin arrin aan loo dirsan.
Dadka qaar baa u arka in Cadde Muuse uu damacsanyahay in qoladaas ooy C/hi isu dhowyihiin wax kala dhaco isagood mooddo inuu kaga aarsanayo dadkiisii uu C/hi ku laayey Bari. Arrintaas ayaa shaki ku abuurtay shacabka Gaalkacyood iyagoo Cadde ku leh haddaad cid la dagaalayso nooga bax magaalada oo ku dagaal bannaanka.
Waxaa taas ka sii daran wuxuu Cadde Muuse toogtay wiil yar ooy isu dhowaayeen oo nin ku dilay Gaalkacyo, kuwo kalana dhaawacay. Cadde Muuse wuxuu awoodiwaayey inuu xitaa la sugo dadkii wax laga dilay si ay mowqifka ugu dambeeya ka qaataan. Ficilkaas darteed ayaa Cadde Muuse damcay inuu wiilasha kale halkaas mariyo isagoo leh yaan reerkaad ka dhalatay ku caayin. Waa labo arrin oon shuqul isku lahayn.
Marka Cadde oo shareecadii diiday ayaa sharaf-xumo la dheelmaday. Waxay ku fiicantahay inuu Ilaahay uga toobad keeno sharci-dejintaas cusub ee uu la yimid.
Meeqa Magaalo-madax Ku-meelgaar ah Jirta | C/Waxid
»Caleemasaarka oo lagu qabtay magaalada Guriceel...
»Xisbiga S.Y.U.P oo Warsaxaafadeed kasoo saaray Qaahira